Ciraaq: R/wasaare cusub oo loo xilsaaray inuu xukuumad soo dhiso & Almaliki oo diidan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ciraaq: R/wasaare cusub oo loo xilsaaray inuu xukuumad soo dhiso & Almaliki oo diidan
A warsame 11 August 2014 12 August 2014
Mareeg.com: Wararka ka imaanaya dalka Ciraaq ayaa sheegaya in madaxweynaha dalkaas, Fu’ad Macsuum uu siyaasiga Xeydar Alcabaadi u xilsaaray inuu soo dhiso xukuumad cusub kadib markii uu waqtigu ka dhamaaday R/wasaare Nouri Al-maliki.
Inkastoo madaxweynahan kazoo jeeda qowmiyadda Kurdiyiintu u xilsaaray Xeydar Alcabaadi u xilsaaray inuu soo dhiso xukuumad cusub, hadana Nouri Al-maliki ayaa ku adkeysanaya inuu xilkaas doonayo mar sadexaad.
Axsaabta ugu waaweyn ee Shiicada Ciraaq ayaa dhambaal ay usoo qoreen madaxweyne Macsuum ugu soo jeediyey inuu xilka R/wasaaraha usoo sharraxo R/wasaare ku xigeen Xeydar Al-cabadi, si uu usoo dhiso xukuumad cusub.
Nouri Al-maliki ayaa shalay ku hanjabay inuu madaxweyne Macsuub la korayo maxkamadda Federaalka, isagoo ku eedeeyey inuu dastuurka dalka meel uga dhacay.
Khilaadka soo kala dhexgalay R/wasaare Nouri Al-maliki iyo madaxweyne Fu’ad Macsuum ayaa gaaray in Mareykanku la safto madaxweynaha kazoo horjeesto Nouri Al-maliki.
Xoogaga ammaanka iyo maleeshiyo shiica ah oo taageersan Ra’iisal wasaaraha Ciraaq Nouri al-Maliki ayaa shalay la geeyey goobo muhiim ah oo ku yaala caasimada Baqdaad iyo daafaheeda.
Talaabadaas ayaa daba socotay khudbad uu Al-Maliki ka jeediyey telefishenka oo uu ku sheegay in uu doonayo in maxkamad la tiigsado madaxweynaha oo Kurdish ah lana yiraahdo Fuad Macsuum. Waxa uu ku eedeynayaa in uu ku xadgudbay dastuurka.
Xiisa ayaa ka dhax taagan, Shiicada, Suniyiinta, iyo Kurdiyiinta, iyadoo Ra’iisal wasaare Maliki uu sheegay in uu doonayo in mar kale uu qabto xilka Ra’iisal wasaarenimo.
Dhanka kale, Telefishinka dowladda ee Ciraaq ayaa goor sii horreysay sheegaya in maxkamada ugu saraysa ee waddanka ay amar ku bixisay in Nouri Al-maliki uu xukunka usii hayo KMG ah.
(Nouri Almaliki, R/wasaaraha waqtigu ka dhamaaday)
Maxkamada ayaa sheegtay, Mr Maliki inuu hayn karo xilkiisa iyo sida uu qorayo dastuurka Madaxweyne Fuad Masum inuu hadda waydiisto in la sameeyo dowlad cusub.Mr Maliki ayaa madaxweynaha maxkamad geeyay, isagoo ku eedeynaya inuu dhaafay waqtigii loo qabtay inuu ku magacaabo Ra’iisalwasaare cusub dan siyaasadeed awgeed.
Nouri Almaliki oo taageero ka heli jiray Mareykanka ayaa taas waayey kadib markii uu guuldareystay inuu si dhexdhexaad ah ugu shaqeeya Shiicada iyo Suniyiinta Ciraaq, taasoo keentay in kooxda Islaamiyiinta ee Daacish la wareegaan meelo badan oo ka tirsan Ciraaq.
Xisbiga Midnimo Qaran oo hambalyeey guusha Recep Tayyip Erdoğan